အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်း၏ခရီး | ဒူဘိုင်းတွင်အန်တိုနီ Raj Jayamani
အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်း၏ခရီး - အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတဦးတည်းမှာကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှိသည်!
အခုပြန်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သို့ ငါ့လည်ပတ်မှု, အလုပ်ရှာ။ နှစ်ပတ်အကြာမှာအခြေအနေကကတိမတည်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်၊ အဲဒီမှာနေတုန်းမှာအလုပ်ရှာရတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကိုငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ နှစ်ပတ်ကြာလေ့လာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာမီရှာဖွေရန်သေချာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်များအားတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှုတ်ဆက်ချင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မကိုသူတို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်မကိုအဲဒီလိုခံစားစေခဲ့ဖူးတယ်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ CV ကိုသူတို့၏လူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်တွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်နှင့်ကိုက်ညီသောကျွန်ုပ်အတွက်သင့်တော်သောအလုပ်များကိုစစ်ယူရန်သတင်းစာအချို့ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာအစပဲရှိသေးတယ်။
အလုပ်ရှာဖွေခြင်း၏ခရီးသည်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်ခဲ့သည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်များသည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်တွင် DU အသစ်စက်စက်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငါဖြစ်သကဲ့သို့ ဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှုထို့ကြောင့် sim ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါက Etisalat ကိုသွားမည်။ Etisalat သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ၎င်း၏ကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောရရှိနိုင်သည့်ကွန်ယက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက် DU ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အ ok ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်မှာခရီးသွားကုန်သွယ်ရေးတခုတည်းအတွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့လို့ကျွန်မအာရုံစိုက်ခဲ့တယ် အလုပ်တစ်ခုရဖို့ တူညီသောလယ်ပြင်၌တည်၏။ ငါအဲဒီမှာနေထိုင်နေစဉ်ငါ့ပစ်မှတ်ထားareaရိယာအဘူဒါဘီဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြစ် ယူအေအီး ခရီးသွား activities ည့်သည်များအများဆုံးလည်ပတ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်ရရှိရန်သေချာပါသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ခရီးသွားအေးဂျင့်တွေရဲ့ရုံးတွေတည်ရှိတဲ့ Suqs Malls၊ ကျွန်ုပ်၏ CV ကိုလက်ကမ်းစာစောင်သို့မဟုတ်လက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ငါလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာငါ့အတွက်အကြပ်အတည်းနဲ့ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည် အကောင့် ကျွန်မအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ရာခရီးသွားကုန်သွယ်မှုအတွက်အလုပ်အကိုင်အ, ငါအရည်အချင်းများတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အတွေ့အကြုံတယောက်ကိုမျှငါမတွေ့ J ကိုခဲ့သောမေးခွန်းအတွက်ရှိရာအဘယ်သူအားမျှနှင့်အရောင်းခဲ့သောသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းများအကြောင်းမေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ applications များမှဘုံအကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကန ဦး ကြိုးစားမှုများနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်၏နည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးရှာဖွေရေးအချင်းဝက်ကိုတိုးချဲ့ပြီးခရီးသွားကုန်သွယ်မှု မှလွဲ၍ အခြားနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ အခြားဖွံ့ဖြိုးစည်ပင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မျိုးစုံအမျိုးအစားများအတွက်ကိုင်တွယ်သောလဲလှယ်ကုမ္ပဏီများမှ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတို့သည်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ငါကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရလဒ်ကတော့အတူတူပဲ။
ငါတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လျက်၊ ငါမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် CV ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်၊ နေရာလွတ်အသစ်များကိုစစ်ဆေးရန်နေ့စဉ်လျှောက်လှမ်းရန်အင်တာနက်ကဖေးသို့သွားခဲ့သည်။ ငါဒန်တာကိုသွားတယ် စော်ဘွား အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုရရန်မျှော်လင့်ချက်အတွက်အဘူဒါဘီရှိရုံး။ ပူပြင်းလှသောအဘူဒါဘီအပူရှိန်ကြောင့်လမ်းများပေါ်တွင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ငါအကြောင်းပြချက်ယခုမေ့လျော့ပေမယ့်ဒီကြီးမားတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်ခဲ့သောရည်ရွယ်ချက်သိကြ၏။
ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းကိုအဘူဒါဘီမှအခြားယူအေအီးနိုင်ငံများသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဂျီ၊ ဒူဘိုင်း ဒါပေါ့။ အဘူဒါဘီ၊ ဒူဘိုင်းနှင့်ရှရီးယားတို့ မှလွဲ၍ အခြားပြည်နယ်များရှိအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများအလွန်မှောင်မိုက်နေသည်။ ဒါကြောင့်ငါ3ပြည်နယ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, အဘူဒါဘီ ဦး စားပေးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ပြန်ပြောင်းတွေးမိသောအခါငါပါကစ္စတန်၊ လာဟိုးရှိကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာဘဝနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးကဲသောအမှုကိုပြုမိသည်ကိုကျွန်မသဘောပေါက်လာသည်။ ငါအရမ်းရှက်တတ်တယ်၊ ငါ့ကိုမြို့ပြင်ကထွက်ဖို့သိပ်မခက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ယူအေအီးမှာငါဇာတိအဖြစ်လမ်းလျှောက် ငါအလုပ်ရှာရန်ပြည်နယ်တစ်ခုမှအခြားသို့တစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အသက်တာဘဝအတွေ့အကြုံပဲ။
အဆိုပါတိုးတက်မြင့်မားလာအဆောက်အအုံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုငါ့ခရီးတစ်လျှောက်လုံးငါ့ကို mesmerizing ပြီအဖြစ် UA E ကို၏လမ်းများပေါ်တွင်ရုမ်းမင်း, တစ်ဦးပင်ပန်းနွမ်းနယ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရဖူး။ ငါကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခိုက်ပျော်မွေ့ချင်ခဲ့သော်လည်းငါ့အားထုတ်မှုအသီးအနှံများမအဖြစ်ကိုကွောကျရှံ့၏အဓိပ္ပာယ်သည်ငါ့ကျောရိုးထဲမှာတွားခဲ့သည်။ အချိန်နှင့်ငွေကိုတပ်အရှုံးငါ့ကို scaring ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အိပ်မက် materializing အတွက်ပါကစ္စတန်အတွက်တည်မြဲဘဝထားခဲ့တယ်။ ငါကအခြားယဉ်ကျေးမှုများ၏ကောင်းသောတန်ဖိုးများကိုသင်ယူနှင့်ငါ့ဘဝအပေါ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရှိရာကနေနိုင်ငံစုံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုခဲ့သည်။
ကြှနျတေျာ့ပညာရေးငါ၏အတှေ့အကွုံမြားငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အပူတပြင်းရတဲ့ခဲ့သည်ယူအေအီးအတွက်ဘာမျှမဖြစ်သလိုပဲ။ အကြှနျုပျ၏အားလုံးမျှော်လင့်ချက်ငါ့ရှေ့မှာ shattering ခဲ့ကြသည်။
ရေနစ်သေဆုံးသောလူသည်ကောက်ရိုး၌ဖမ်းမိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ရှင်၏ရည်ညွှန်းချက်အရထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီသို့သွားခဲ့သည်။ ငါရည်ညွှန်းခဲ့သောသူသည်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် မန်နေဂျာ ကုမ္ပဏီ၌ရှိ၏ ပါကစ္စတန် ထို့အပြင်သူ၏ဆွေမျိုးများနှင့်အတူ 1980s ရှိယူအေအီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က General Zia စစ်တပ်အုပ်စိုးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ယူအေအီးတွင်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။
ယခုကုမ္ပဏီသို့ပြန်ရောက်လျှင်ကရိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာများအတွက်ရိန်းများကိုပေးသည်။ ငါဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ယူအေအီးမှာဆောက်လုပ်မှုတွေဘယ်တော့မှမရပ်နိုင်တော့ဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုကုမ္ပဏီရဲ့စာရင်းဌာနမှာတာဝန်ပေးတယ်။ ရုံးခန်းသည်ဒူဘိုင်းတွင်ရှိပြီး 90 ဒီဂရီသို့ကျွန်ုပ် ဦး ခေါင်းကိုလှည့်လျှင်တောင်ထိပ်သည်မမြင်နိုင်သောထိပ်တန်းမျှော်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုမျှော်စင်ကုမ္ပဏီတွင်ရုံးခန်းအဖြစ်4ခန်းတိုက်ခန်းရှိသည်။ အဲဒီမှာငါဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Baloch (ပါကစ္စတန်ပြည်နယ်) နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူဟာအရမ်းကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူကငါ့ကိုနှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ Baloch နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်ကြားသိသမျှအားလုံးမှားယွင်းစွာတွေးမိသည်။ ထိုလူသည်ယူအေအီး၏ယဉ်ကျေးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်။ ယူအေအီး၏လမ်းများနှင့်လမ်းများ၌ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်များသည်ရုံးခန်းများနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုများတွင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ သူကငါ့ဆရာလိုပဲ သူကကျွန်တော့်ကိုကုမ္ပဏီကအသုံးပြုတဲ့စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲဟာ Peachtree ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်။ အခုငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုံးဝန်ထမ်းများမှာများသောအားဖြင့်ပါကစ္စတန်သားများဖြစ်သည် အင်ဒီးယန်း နှင့် Phillipinos ။ ငါယူအေအီးနိုင်ငံသားတွေကအဲဒီအချိန်တုန်းကဖိလစ်ပိုင်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ဖော်အဖြစ်ပိုနှစ်သက်ကြတယ် ငါသူတို့စိတ်ကူးမရှိ, သူတို့ကပိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသို့မဟုတ်ချွေတာအလုပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းစိတ်ကူးမရှိပါ။
အဲဒီရုံးမှာကျွန်တော့်ရဲ့4ရက်အတွေ့အကြုံပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလစဉ် AED 2,500 ပေးတယ်၊ သူတို့ကတစ်လကို AED 200 နုတ်မယ် ဗီဇာ ကုန်ကျစရိတ်။ နေအိမ်မှရုံးသို့ပြန်လာသည့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကုမ္ပဏီကပေးခဲ့သည်။ ငါမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်သကဲ့သို့, ဒီနှင့်အတူမကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။7နံနက် မှစ၍7ညမှအလုပ်ချိန်များသည်ရုံးတွင်း၌သာအသုံးပြုရမည့်2နာရီတစ်ရက်နားချိန်နှင့်စတင်သည်။ ထိုအချိန်သည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဗီဇာသူတို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကနေထွက်ပေါက်တံဆိပ်ခေါင်းရဖို့ငါ့အအကြံပြု Keesh ဧရိယာရိုက်ထည့်ပါနှင့်2နှစ်ပေါင်းအလုပ်အကိုင်ဗီဇာနှင့်အတူထည့်သွင်းပြန်လည်ကြောင့်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။ နေရာထိုင်ခင်းအလုံးစုံတို့အဘို့သာ 12 ရေချိုးခန်းရှိကြ၏,2က shared Sharjah အတွက်စတူဒီယိုတိုက်ခန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမ privacy ကိုရှိခဲ့သည်။ Office ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တို့ဟာ6pm မှာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်နေ့အဘို့ကိုစတင်ခဲ့သည်6မတိုင်မီအဆင်သင့်ဖြစ်ရပါမည်သည့်ဗန်ထဖမ်းရန်ဒါဖြစ်ကြောင်းကို5မှာရုံးခန်းများအတွက်စွန့်ခွာရန်စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာအခမဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုရေချိုးခန်းများအသုံးပြုမှုအပေါ်လျှောက်ထားခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးလာကြ၏။ ငါ့ကိုနောက်ထပ်စိတ်ဆိုးနဲ့ကျွန်မပြီးသားကမ်းလှမ်းချက်ကိုအားဖြင့်မရောငျ့ခဲ့သည်အတိုင်းဤ hectic လှုပ်ရှားမှု, ငါ့ကိုပိုကောင်းတဲ့ကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်ပြန်သွားကြဖို့ဖြစ်စေထင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမှာအခြေအနေစိတ်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရုံးများအတွက်စွန့်ခွာလာသောအခါ6မှာရောက်ရှိဖို့ငါတို့အဘို့အ 45 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ Sharjah ကနေဒူဘိုင်းကူးခြင်းနှင့်ဝင်ခဲ့သည့်သာတံတားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ကြောင့်နေ့စဉ်အလုအယက်ဘန်ပါမှဘမ်ဖြစ်လေ့အထွတ်အထိပ်ရုံးမှနာရီ။ ငါမကျေနပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ယခုငါလာပြီခဲ့သည်တိုင်း Vibe အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကောင်းကိုစှဲဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်သောရတဲ့မတိုင်မီသယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်တချို့ဝန်ကအမြဲရှိပါတယ်။ ငါဒီကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သောရင့်ကျက်မဟုတ်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မအဘူဒါဘီ၌ငါ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အတူတနင်္ဂနွေဖြုန်းဖို့လိုခငျြထိုရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်ရာကြာသပတေးနေ့တွင်။
နောက်ကျောအဘူဒါဘီအတွက်ငါပြန်ပါကစ္စတန်၌ငါ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူအခြေအနေကဆွေးနွေးကြသည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်သောအရာတို့ကိုပိုကောင်းလိမ့်မယ်, ဒီသူတို့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဘို့အခံဖို့ကျွန်မကိုအကြံပြုဖြစ်ပျက်သိတယ်။ သူတို့ကိုငါစကားကိုနားထောငျဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့အလုပ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. သူတို့နှငျ့အတူအကြှနျုပျ၏အတိတ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်, ငါ့မိသားစုကိုပြန်ပါကစ္စတန်ကိုပြန်သွားဖို့ငါ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ငါသည်ငါ့မိသားစုငါ့ကျောမှာကိုသိသောကြောင့်, ငါသညျဤအန္တရာယ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တာ, ငါ့ပြန်လာအပေါ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ ပါကစ္စတန်နှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အသက်၏တစ်ခုတည်းသောအရေးပါနှင့်အရေးပါခြားနားချက်မိသားစုဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျအစာရှောငျသွားချင်လျှင်သင်အတူတူသွားရပြီးတော့ရှည်လျားသွားကြဖို့ပါလျှင်တစ်ဦးတည်းကိုသွားပေမယ့်ကပြောပါတယ်။ ယူအေအီးငါ၏အခရီးရှည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအပြည့်အဝပြင်ဆင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
နောက်ပိုင်းပေါ်တစ်နှစ်ပြီးနောက်, ငါကမ်းလှမ်းချက်ကိုတက်ပေးခြင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ညာဘက်သက်သေပြနိုင်အောင်အဖြစ်အလုပ်ပိတ်ထားခဲ့သည်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီကြား၏။ ယူအေအီးကုမ္ပဏီများသည်နှင့်တူခုနှစ်တွင်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောစီးပွားရေးကိုအလားတူအရှိန်အဟုန်အတွက်အနီးကပ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်။
ဤတွင်ကျနော်တို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူဥပုသ်လအတွက်ငါတို့လက်နှင့်အတူဤအစိုက်သောအကြောင်း, တစ်ဦးစီးနင်းနေစဉ်အတွင်းလမ်း greenbelt ပေါ်တွင်သစ်ပင်များမှာထောက်ပြတဲ့သူအဘူဒါဘီအတွက်ပါကစ္စတန်ကနေတစ်ဦးအသက်တက္ကစီဒရိုင်ဘာဖော်ပြထားခြင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေပါတယ်။ ကျွန်မမိသားစုထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်ယခုဖြစ်သောယူအေအီး၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအခန်းကဏ္ဍကစားသူလူတစ်ဦး၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ ငါသည်ငါ့ခရီးရှည်၏2လအကြာပြန်လာ၏။ ငါခံထိုက်တစ်ခုခုရဖို့မျှော်လင့်ချက်အတွက်နှစ်ကြိမ်, ငါ၏ပြန်လာလက်မှတ်နေ့စွဲတိုးချဲ့ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်သော်လည်း။ ကြှနျတေျာ့ပြန်လာပြီးနောက်ငါအမြဲငါ့ကံကြမ္မာကြီးနှင့်လူတိုင်း၏မကျမည်အကြောင်းယုံကြည်သည်ယူအေအီးအကြောင်းကိုငါ့ကိုတောင်းသောသူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမ။ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူအားပေးသင့်ပါတယ်။ ငါသာနွေရာသီအလုပ်တစ်ခုအမဲလိုက်ခြင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးရာသီမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုသို့ပြောသည်။ ဒါကြောင့်မတ်လမှအောက်တိုဘာလကနေစီစဉ်ထားသည်။
11 နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါပြန်လာအပ်သည်ငါ့ကိုဆက်နေရန်အဘို့အပိုကောင်းခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငါအများကြီးပိုရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်သန်နိဋ်ဌာနျနှငျ့အတူဘဝကိုမြင်နေတော့တာပဲ။ ငါပြန်လာပြီးနောက်ကျွန်တော့်ဘဝမှာအများအပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လေ၏။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်2စကားဖြစ်ရပ်များခရီးအပြည့်အဝငါ၏အ 5000 လအတွင်းကိုဖုံးလွှမ်းပေမယ့်နေဆဲငါကိုအောကျမေ့သောအရာကိုရေးသားခဲ့သည်မနိုင်ကိုငါသိ၏။ ငါသမိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အားလုံးကိုရေးသားခဲ့သည်။ အမြားအပွားလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကိုမေ့လျော့ပုံပြင်ကိုတဖန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးနိုင်ပါသည်။ ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းတစ်ဟောပြောပွဲနှင့်သင်ခန်းစာအဖြစ်ဖတ်ပါလိမ့်မည်သေချာဖြစ်၏။ ဒီအားဖြင့်ငါမပိုပါလိမ့်မည်ပင်ပြီးနောက်ကိုအောကျမေ့နိုင်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏အရေးအသားငါ့ကိုကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်နှင့်အတူယူအေအီးမြင်၏သမိုင်းပညာရှင်စေလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်အမြဲတို့သည်ကြီးစွာသောဆရာနှင့်ဆရာအဖြစ်ကိုအောက်မေ့ပါလိမ့်မည်ယူအေအီး။ သငျသညျအစဉ်အမြဲလူများ၏အိပ်မက်ပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ရုပ်လုံးပေါ်လာနိုင်ပါစေ။
အန်တိုနီ Raj Jayamani နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အအမဲလိုက်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း2၏ခရီး။ သူကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအာရုံစိုက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်လယ်ပြင်၌ရှိသောအလုပ်တစ်ခုရဖို့နိုင်ခဲ့သည်သိရသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုကောင်းသောပေးပါ လမ်းပြ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသငျသညျယခုတှငျအလမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။
Sohaib Hasan ကြေးနန်း